What Doesn't Kill Me — njem Lee - Official Site
Mgbe ị na-aga site a ike oge, ndị mmadụ na-mgbe niile maara ihe na-ekwu. N'ihi bụ efu clichés ma ọ bụ trite mgbalị ị ṅụrịa. M na mgbe nwere nsogbu cliché phrases- ụdị nke na-apụtaghị ihe ọ bụla iji onye si ha, ha anaghịkwa n'ezie nyere onye ahụ aka-anụ olu ha. -Enweghị isi na ihe ndị yiri, "Chin elu" na "Ọ ga-esi ka mma." N'Ezie? Kedu ka i siri mara? Ị na-eme ndị enyi gị ọ bụla hụrụ site n'inye ha ìhè, N'ụbọchị nke abụọ na-enwe olileanya na-amaliteghị na ihe ọ bụla. Mgbe mgbu dị ukwuu wɔfrɛ wɔn T anyị mkpa mkpatụ siri ike eziokwu ga-akwagide anyị.
N'oge ọ na n'obi na cancer, Christopher Hitchens kwupụtara nkụda mmụọ yiri nke na ụfọdụ ndị e-efu nkebi ahịrịokwu anyị na-atụkwasị gburugburu. Ọ na-etinye peeji ole na ole awakpo otu n'ime ha n'akwụkwọ ya, enwe. ọ na-ekwu, "Ọ kachasị, M ubé kwụsịrị na-esite mara ọkwa na 'ihe ọ bụla anaghị egbu m na-eme m ike.' "Ọ gara n'ihu ikwu, "Na arụrụala ahụ ụwa ... e nwere nnọọ ọtụtụ ihe ndị nwere ike igbu gị, adịghị egbu gị, na mgbe ahụ na-ahapụ gị nke ukwu adịghị ike karị. "Ike na ị dị nnọọ na-eche ọṅụ?
Ọ na-ada mwute, ma m na-eche Hitchens ziri ezi echiche. Ọ bụ nnọọ ihe kwere omume na anyị nwere ike na-aga site ihe ndị siri ike na ọ bụ nanị ime ka anyị daa ma na-ewetara anyị nso n'ebe ọnwụ. M nwere ike iche na mmadụ ajụ ajụjụ, “Olee otú ihe a dị egwu mee ka m ike?” Ọbụna ihe ndị kasị mma mmadụ nwere ike-agbajikwa ala site na obi ọjọọ nke anyị dara ụwa. Nchekwube nwere ike na-adị ndụ ọtụtụ iti ihe ruo mgbe ọ etịbede, na eziokwu akpatre akpagbu umu ya. Nkebi ahịrịokwu na ozugbo dara cute now iyi abaghị uru. Ma bụ ndị na-ebughị mmetụta Hitchens wakpoo mgbe ezi? eche m.
Mgbe Ọ Bụ Eziokwu?
"Gịnị adịghị egbu m na-eme m ike" nwere ike ịbụ eziokwu, kama ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na e nwere ihe a gafechaa ndụ a. Ọ bụrụ na nke a ndụ, ụwa a, ma ar niile e nwere, Hitchens ziri ezi. Ọ bụ ụgha. Ọ ga-abụ ka na-ekwu, "Gịnị adịghị ngụkọta ụgbọala m eme ka ọ di ike." Nke ahụ bụ ihe nzuzu. Ị Ọ nwere na-eleghara eziokwu kwere na. Ma ọ bụrụ na anyị nwa oge ọnwụnwa nwere ụdị ụfọdụ nke ndu ebighi pụtara ọ na-agbanwe ihe niile.
Paul na-agwa anyị, "Ihe niile na-arụ ọrụ ọnụ maka ọdịmma nke ndị hụrụ Chineke n'anya ma na-akpọ dị ka nzube ya." N'amaokwu a, bụ mgbe ụfọdụ emegbukarị, ma ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị mma nkwa nile nke Akwụkwọ Nsọ. Nke a apụtaghị na Ndị Kraịst bụ anwụ anwụ. Anyị nile ga-eche ule ihu, ma anyị nwere ike akpatre ghara imeri ha. Ọbụna anyị kasị njọ iro, dị ka nhụjuanya na ọnwụ, aghọkwa ndị enyi anyị na Kraịst, n'ihi na ha na-emecha na-arụ ọrụ maka ọdịmma anyị.
Ya mere, olee kpọmkwem otú a na-agbawa obi n'ọnwụnwa n'ezie ime ka anyị na ike? Ebe a ụzọ atọ (na ịrịba yitewere):
1. Ha mee ka anyị adabere na Jesus
Mgbe m na-eche dị ihe nile dị ndụ m na-aga nke ọma, obi m ozugbo gbaba onwe-dabeere. Ọ dịghị ada ada. M na-amalite ikpe ekpere na-erughị n'ihi na m subconsciously iche na anaghị m akọ ihe ọ bụla. M dị mpako n'ihi na m na-eche na m na ihe mere ihe niile na-aga nke ọma. N'ime oge ndị, M na-echefu na Chineke bụ Onye na-enye ezi onyinye, na m ka na-mkpa Ya iji na-azụ m. M na-anya isi na m isiokwu ya bụ niile nke Ya na ebere.
Ma mgbe ọnwụnwa bịaara anyị, ha na-egosi anyị onwe anyị adịghị ike. Ọrịa na-echetara otú emebi emebi anyị na-, dina-offs echetara anyị na ịrụsi ọrụ ike adịghị ekwe nkwa ihe ọ bụla, na esemokwu na-echetara anyị na anyị kwesịrị Jesus ke kpukpru n'ógbè nke ndụ anyị.
2 Ndị Kọrịnt 12 bụ m ihe nkasi obi n'oge nke adịghị ike. Paul na-amata na Chineke nyere ya ka ọnwụnwa bịaara anyị "na- [ya] si ebu. "O kwuru na ya-anya isi jiri obi ụtọ na ya adịghị ike, nakwa na ọ bụ ọdịnaya na ụdị nile nke ọnwụnwa. Olee otú Paul enwe afọ ojuju na ọbụna obi ụtọ maka Ọnwụnwa? M na-eche Paul na-ekwu na ọnwụnwa ndị ahụ mee ka o doo anya na ya mkpa Chineke amara na ike. Self-na nduzi bụ adịghị ike, na-esi dabere na Kraịst bụ ike. Ya mere Pọl na-ekwu, "Mgbe m na-adịghị ike, mgbe ahụ ka m ike. "
2. Ha mee ka anyị ṅomie Jizọs
Anyị ga-enwe ike ịtachi obi na-agbawa obi n'ọnwụnwa ruo mgbe anyị ghọtara na anyị nkasi obi na ezi ahụ ike abụghị ihe bụ ihe kasị mkpa. Nkasi obi na ahụ ike ihe ndị dị mma Chineke-enwe obi ụtọ inye anyị. Ma Chineke isi maka ndụ anyị bụ na anyị ga-adị ka Jesus. Na Ọ bụ ọbụna njikere iji ọnwụnwa imezu na. Ndị Hibru 12 -ekwu, "[Chineke] adọ aka ná ntị anyị maka ọdịmma anyị, na anyị nwere ike ịkekọrịta ya ịdị nsọ. "Ọzụzụ Chineke mgbatị nwere ike na-afụ ụfụ mgbe ụfọdụ, ma O ga-eme ka anyị sikwuo ike.
James 1:2 na-echeta, ebe ọ na-agwa anyị ka anyị "Gụọ ya n'ihe ọṅụ, ụmụnna m, mgbe unu zutere ọnwụnwa dị iche iche iche iche…"Ihe mere anyị ga-agụrụ ya ọṅụ bụ Kraịst agwa ọ na-arụpụta. Anyị ịdị umeala n'obi dị mkpa karịa anyị obi ụtọ. Ọ ka mma inwe ike n'anụ ahụ na n'ụzọ ime mmụọ siri ike.
3. Ha na-eme anyị ogologo na-na Jesus
Obi anyị na-ebelatawo site mmehie, na anyị na-emekarị-achọta onwe anyị agụụ maka ihe site n'ihe ụwa a nwere na-enye. Ma mgbe nwa oge ọṅụ nke ụwa a na-e si anyị, anyị na-eti na Earth adịghị n'ụlọ anyị. Anyi edebe ihe n'ebe ọzọ.
M ụtọ anọ na mma hotels, na mgbe m na-eme m na-agbalị iji ohere nke niile elele. Ma mgbe ahụ, m na-amalite na-atụ uche nwunye m, na mgbe ahụ, m na-aghọta enweghị m uwe m pụtara ime ka, na mgbe ahụ, m na-aghọta ụlọ ọrụ bụ ihe dị mma ruo ọkara nwunye m ji esi nri. Ọ na-echetara m na nke a hotel abụghị m n'ụlọ. Unmet ọchịchọ ime ka m ogologo n'ụlọ. N'ụwa a abụghị ebe anyị bụ nke, na ọnwụnwa echetara anyị na anyị paradise bụ n'ebe ọzọ, na Onyenwe anyị. A ga-enweghị unmet ọchịchọ n'Eluigwe, n'ihi na Onyenwe anyị ga-egbo niile anyị agụụ. Ọ ga kwusi mgbu na wụsa Ya amara si na anyị ruo mgbe ebighị ebi.
Ya mere, oge ọzọ ị na-enwe enyi na-aga site a siri ike oge, ichetara ha na ọbụna ihe ndị kasị mwute ọnọdụ pụrụ ime ka anyị ike. Ọ bụghị site na echiche ziri ezi na nchekwube, kama site n'aka ezi olileanya na ezigbo mgbanwe. Na mgbe ị na-aga site a siri ike oge, ka ọ na-abịaru gị nso ka Christ. Atụla egwu, Jehova nọnyeere gị.
Onye kwere ekwe nwere olileanya gafee ili, na-esote ndụ anyị ga-adị ka na na Ya. N'ihi ya, ọbụna ihe na-egbu anyị na-eme ka anyị siri ike.
emr • September 17, 2013 na 2:06 pm • zaghachi
enyi • September 17, 2013 na 2:25 pm • zaghachi
N'ihi na njem, Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe m mkpa ịnụ ugbu a. Na-aga site a super siri ike oge na ikwesị ntụkwasị obi na-akasi ya na ụmụ ya doro itu n'anya m.
kwena Albert • September 17, 2013 na 2:39 pm • zaghachi
Awesome piece.I ga-ewepụ ndị na-emebu clichés na kama ntụziaka ndị na mgbu site taa gaa n'ihu anya na na oké nkume nke dị elu karịa i..Thank ị sir
Michael • September 17, 2013 na 2:55 pm • zaghachi
Nke a bụ obere ihe ijuanya na-agụ. Akananam chere n'ezie banyere ezi okwu na ọnọdụ ọjọọ ndị a ihe ọjọọ. ma, ọzọ, ọ bụ site na Chineke otuto na anyị nwere ike jikwaa site mgbe ihe siri ike na-aghọta na e nwere ihe ka ụwa a. Gịnị anaghị egbu m, ma ọ bụ na-eme, -eme ka m siri ike n'ihi na ọ na-adọta m nso n'ebe Chineke.
Franky • September 17, 2013 na 3:41 pm • zaghachi
M tetara n'ụtụtụ a mmetụta ebu na ụdị untouchable ikwere na ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe ná ndụ m na-aga na na na na, mgbe ahụ, m na-adịghị mkpa ịtụkwasị Chineke obi ọbụna ihe. M bụ ihe ọjọọ na e chetaara ya nnọọ ozugbo dị ka ụbọchị a na-enwe ọganihu na. Daalụ maka gị nghọta n'ụzọ a na m ekpe ekpere ka Jehova ga na-egosi m Grace na eburu m si ebe m.
Nwanne gị na Christ
raenee • September 17, 2013 na 6:06 pm • zaghachi
Ezigbo Mr.trip lee,
M nnọọ n'anya nke a (: i nwere ajụjụ chọọchị m na-eme n'ezie a na usoro “ihe n'ụwa m m ebe a maka?” n im on n'ime ndị ntorobịa ndú na m ga-eme ihe a na-eso ụzọ na ihe niile i kwuru agbatị na n'ụzọ zuru okè ime ka na nke ngalaba a na-dabere na chi n'oge ụzọ ụkwụ… ma ọ bụrụ na ya ok nwere ike i iji ụfọdụ n'ime gị stof? Dị ka Lil ruturu ma ọ bụ Akwụkwọ Nsọ ma na gị na permisson …. M kpọrọ ihe n'anya gị stof na ya diffently enyere m na-eto eto dị ka Kraịst (: na-ekele gị maka ịbụ a onye nke Chineke n asọpụrụ gị ọkpụkpọ na-aga n'ime nkwusa. Gods etinyecha-eme ụfọdụ dị ike ihe ná ndụ gị na gị familys ndụ (:
Joel • September 17, 2013 na 6:39 pm • zaghachi
M hụrụ n'anya ị ịkwada.. i n'ezie ime dị egwu!
GabeTaviano • September 17, 2013 na 6:47 pm • zaghachi
Kemgbe a ike ike afọ abụọ, na nke a post na-dị nnọọ bursting n'eziokwu eziokwu. Mkpa nke ukwuu n'ihi na nke a nna ụmụ agbọghọ atọ, na di na-ede akwụkwọ na-ekwu okwu onye ozi agbanweela si ịma aka nke alụmdi na nwunye na nne na-anọgidesi ike mgbe niile yiri efu.
Your track, Adị m mma, kemgbe m isiokwu song afọ abụọ gara aga, njem. Adịghị m crank ọ bụla song ọsọ, na agaraghị m gwara Chineke ka pen okwu na okwu ọ bụla miri ka mkpụrụ obi m. E nwere oge mgbe ọbụna n'onye kasị nta echiche igbu onwe gafere uche m. Ị n'aka eche dị ka ị na-na na na-alụ agha mgbe nke ahụ bụ eziokwu eziokwu.
Ma ezigbo olileanya na ezigbo mgbanwe bụ ihe ndị ọzọ bara uru karịa enye elu. Nke ahụ bụ nnọọ eziokwu. E nwere ihe a ọgụ a na-alụ ọ bụla n'ime anyị. M na-ekele gị na-ewere oge iji pen ndị a okwu, njem. Aga m na-agụ site na nke a post a ole na ole ọzọ ugboro. Na-eto Chineke n'ihi okwu site ị na anyị earbuds, na ogbo, na ikwuputa okwu Chukwu, n'ụlọ gị, na na web.
Liam • September 17, 2013 na 8:17 pm • zaghachi
njem, na-ede nwoke! Your abụọ ikpeazụ posts nwere gwa kpọmkwem ebe m na-na na ndụ m na-abịa gafee ha dị nnọọ mgbe m chọrọ. Chineke na-doro anya na-arụ ọrụ site n'aka gị.
Carlota • September 18, 2013 na 12:50 Abụ • zaghachi
Ihe i kwuru nwere inyere m aka ịghọta somethings na ga pụtara alot m. The ozi na-akọ alot na ihe m na-aga site na ihe 5 afọ ma ka na-aga site now.Thank ị njem Lee.
te ndekai • September 18, 2013 na 4:06 Abụ • zaghachi
ọ bụ eziokwu n'ihi na Kraịst bụ onye na-ejegharị site n'okwukwe, ọ bụghị site sight.i anọwo na ike; ebe ihe nile bụ ihe ọpupu megide m expectations.It ghọrọ ọbụna karị na-ntụkwasịobi m na Chineke ma n'ihi na i ma na ihe mgbu m nọ na-enwe bụ nwa oge na e mere iji mee ka m ike ọ bụghị ibibi me.i ẹkenịmde ke Jesus lee, m na i ike.
Charles • September 18, 2013 na 4:11 Abụ • zaghachi
Echere m na ị nwere a mpempe nwere a ọtụtụ nke eziokwu. N'ezie dị ka a kwere ekwe ihe na-eme igbu m ma ọ bụ na-eme na-eme ka m siri ike. Chineke na-agọzi gị na-enye gị nghọta na-ekwu okwu ọzọ nke Ya eziokwu ndị Ya.
Kathryn • September 18, 2013 na 9:31 Abụ • zaghachi
Daalụ maka ozi a. M n'ezie ume m n'ihi na m na e nwere a siri ike oge maka gburugburu 12 afọ, alụ na-emetụbeghị nke ọrịa na m chọrọ n'ezie ime ka mmekọrịta mụ na Chineke. M na-ebe n'oge m nnọọ na-eche irè mmetụta uche, ma m kwere na Mmụọ Nsọ na-agba m ka m na-atụkwasị obi Jesus na ịdabere na ya.
Amanda • September 18, 2013 na 11:03 Abụ • zaghachi
Otú ahụ onye mmụta post na aka n'ezie ị na-etinye ihe na anya, dị nnọọ furu efu nwanne m nwoke 3 ọnwa gara aga ka otutu myeloma na m mum bụ na oké nkebi nke mgbaka na m maara na-enwe ike ịnagide m nwere isere ike m si na Chineke, na-aṅụrị ọṅụ na ụbọchị tupu ya rue o kwere ka m na-edu ya Jehova ma nye ndụ ya. Na-elu na-arụ ọrụ ọma, na ị na-emenye m 18 afọ nwa dee music na ịnọgide na ya piano, ịnọ gọziri agọzi!
Corrie Reynolds • September 18, 2013 na 11:13 Abụ • zaghachi
Ị mgbe niile nwere a ụzọ etinye okwu m ihe m na-eche ma m na-enweghị ike ide. I nwere ọtụtụ ezi talent. Daalụ maka iji ha n'ihi na ihe ị na-akpọ ime. Chineke na-agọzi gị nwanne.
DeniseSheppard • September 18, 2013 na 12:08 pm • zaghachi
Mr. Barefield…….ị na-a magburu onwe, enwu atụ ịhụnanya Chineke. Ọ gọzie gị na lyric ịkọrọ ozi Ya. M ụtọ ịgụ ihe ị dee, na-ege ntị gị music na ga n'anya ịnụ gị na onye na oge ụfọdụ. Daalụ maka na-erubere Chineke isi na-ekere òkè okwu Chineke; mgbe, mma, uplifting na nri na ebe! Good Gọzie Ị Nwanna!
BrandonPulley • September 18, 2013 na 12:30 pm • zaghachi
Chụrụ m n'ọrụ taa na m ike ịgwa unu na nke azịza ekpere nke a bụ! Mgbe m hapụrụ m wee na-eti mkpu na-agwa m ihe m ga-eme na-agwa m biko. Ugbu a, m maara. M mkpa ịnọ umeala n'obi na-aghọta na-esote ọrụ ọ na-enye m na-n'aka-ya abụghị nke m ọrụ!
Harry Nanthambwe • September 18, 2013 na 3:24 pm • zaghachi
Nke a hs ihe m mgbe niile chọrọ 2 anụ ma na-agụ. otuto Chineke 4 u ezi.
Tendai • September 18, 2013 na 7:41 pm • zaghachi
Nke a bụ na-agba ume stof, nwanne. Daalụ maka na-echetara m nke ozioma; ntọala nke Kraịst ọ bụla ndụ.
Gomezgani Saka • September 19, 2013 na 12:46 pm • zaghachi
Amen na mmadụ!
Debbie • September 19, 2013 na 9:09 pm • zaghachi
Your nkọwa nke nna nna anyị hà pụtara mgbe niile ka m nghọta. Daalụ njem na biko anọgide na-enyere na-emeghe anya m.
Sembereka Paul II • September 21, 2013 na 5:19 Abụ • zaghachi
Amen, Ngọzi gị.
Bobby • September 22, 2013 na 9:52 pm • zaghachi
Kwusaa ya ịkwada!
Sunge • September 24, 2013 na 3:30 pm • zaghachi
Amen. Daalụ nke ukwuu maka mmụọ gị jupụtara nduzi na izi. A n'anya blog!
Kaila • October 3, 2013 na 2:58 pm • zaghachi
M na-ekweta na mgbe ụfọdụ, mgbe ndị mmadụ na-achụ okwu ị na-eji, ha adịghị eme mgbe nile ka ị na-eche mma. Mụ na ezinụlọ m nwere na nke a n'oge okpomọkụ na nwa nwanne nna m si olili ozu. Ọ gbara na gburu onye o weere a enyi, ụbọchị abụọ tupu ya 19 ụbọchị ọmụmụ. Ọ dịghị onye n'ime ndị na-akpọ okwu agbamume ndị na-enye aka n'ihi na isi ajụjụ anyị niile nwere bu, ” mere ya, ọ ka bụ nnọọ 'nwa?” ma, e mesịa anyị anya azụ ma na-ahụ na n'agbanyeghị na ọ bụ ihe dị mwute oge ya me ezinụlọ anyị nso ọnụ na ịtụleghachi mmekọrịta anyị na ndị ọ bụla ọzọ na na Chineke. Anyị na-enweta a ọhụrụ òtù ezinụlọ-adịghị anya mgbe na nwa-ya nwayi, onye nwere ike ya ejima.
Angie • October 3, 2013 na 5:03 pm • zaghachi
M ka ọ dị mkpa ka na-agụ nke a ugbu a. Chukwu gozie gị.
CynthiaAghomon • October 4, 2013 na 1:09 pm • zaghachi
Nke a bụ otú encouraging..God ahapụtụbeghị na ọ bụghị banyere na-amalite na ya ọ bụla children..we dị nnọọ mkpa ịnọgide na olileanya ndụ ma kwere na Jehova agaghị ahapụ anyị ma ọ bụ gbahapụ anyị. Ndị Rom 8:18 kwuru maka m ewere ya na ahụhụ nke a ugboro erughị eru ga-eji tụnyere ebube nke a ga-ekpughe na us..amen
ee • October 10, 2013 na 1:59 pm • zaghachi
ma ọzọ, M na a na-ebipụ ka obi!M na-arịa ọrịa n'oge na m na-eche ihe mere Chineke na-ekwe ka ihe ndị a mere ka m. Na m ahuokika m na-aga site na FB peeji nke ọkacha mmasị m celebs na m wee gafee gị website. Ewoo! Jehova zara ekpere m ma kwuo okwu ozugbo m! (site Njem) Ọ bụ dị ka Njem ozi na-ahaziri maka m (Nke ahụ bụ n'ihi na Mọ Nsọ na-eji ya na-eje ozi anyị)….Chineke na-baara m site n'aka-ya (ya music,blog posts na okwuchukwu) Echere m na m nọ na-elekwasị anya ka ihe na nke a hotel na abụghị m n'ụlọ. Ya mere ugbu a, m maara ihe mere m na-arịa ọrịa (ihe Jehova na-agbalị ịkụziri m site na nke a ikpe)…Chineke nọgide na-agọzi gị njem Lee, ọ bụ ihe ịtụnanya na n'ozi gị esịmde anyị (ndị nsọ na Africa) na ezie na anyị na-na na mgbe zutere, M na-eche dị ka m maara na gị onwe gị n'ihi na m nwere ike ikwu na ihe niile ị na-ekwu. Ma n'ihi na gị music n'ezie baara, na-agba ume, mgbazi, na-akụzi m!….. -anọ gọziri agọzi!!!!!!!!!
pelumi • November 3, 2013 na 10:03 pm • zaghachi
i na-eche na ọ
agọzi gị BroTrip
KevinSteele • November 7, 2013 na 9:02 pm • zaghachi
“Anyị ịdị umeala n'obi dị mkpa karịa anyị obi ụtọ.” Na n'ezie kụrụ m nwoke. Nọgidenụ na-eme na ihe ọma music na Chineke na-agọzi.
Sherice • December 2, 2014 na 9:53 pm • zaghachi
M ekele ma na-agba ume site na nke a…amen!